Abakhiqizi Besibhengezo Somcimbi We-Drone - Abahlinzeki Besibhengezo Somcimbi wase-China kanye Nemboni
Isango lendandatho yasendlini, idizayini ephumayo, isango lomjaho we-drone elilula neliphathekayo elinezintuba ezizungeze isango elingavumela umugqa wokukhanya ukuthi udlule, izisekelo ozikhethela ezengeziwe ziyatholakala, zilethe ubumnandi obuningi bomjaho.
Isango le-Indoor D yisango lomjaho le-FPV elenzelwe umqhudelwano we-drone racing, ukusetshenziswa kuyafana nesango lendandatho yangaphakathi kodwa umumo ohlukile.Izinto zokwakha zekhwalithi kanye nokubukeka okusebenzayo, okuphelile.Ngezinketho eziningi zokukhweza, kulula ukwakha izifundo ezahlukahlukene.
Indandatho ye-arch yangaphakathi iyisango endizayo le-Micro FPV le-Tiny Whoop Inductrix kanye ne-Micro Racing Drones, ukusetshenziswa kuyafana nesango lendandatho yasendlini kanye nesango le-D elingaphakathi kodwa umumo ohlukile.Izinto zokwakha zekhwalithi kanye nokubukeka okusebenzayo, okuphelile.Ngezinketho eziningi zokukhweza, kulula ukwakha izifundo ezahlukahlukene.
Isango eliyindilinga langaphandle, liwuhlobo olulodwa lwama-Quadcopter Racing Gates ongafuni ukugeja, aklanyelwe umjaho we-drone kuphela.Izinto zokwakha zekhwalithi kanye nokubukeka okusebenzayo, okuphelile.izinga okusezingeni eliphezulu FPV Racing Air ring isango.
Ifulegi lenziwe ngendwangu elukiwe ye-polyester warp futhi liqinile ngokwanele ukuthi lingasetshenziswa ngaphandle ezimweni eziningi zezulu.
Isango le-arch langaphandle isango lomoya elidume kakhulu elikwenza ukwazi ukumisa ithrekhi yomjaho eyinselele ye-FPV kalula nangokushesha, Inketho efanelekile yabahleli be-FPV Race, amakilabhu ngisho nakubantu abafuna ukuhlola nokuthuthukisa amakhono abo okundiza e-FPV.
Futhi isetshenziselwa iphromo yamafestivali noma isibonisi somcimbi, isibonelo, ulayini othi Qala noma Qeda wemicimbi yekilabhu ejabulisayo.
Imidwebo ingenziwa ngendlela oyifisayo, Indwangu enayiloni eqinile iqinile ukuze isetshenziswe ngaphakathi/ngaphandle.
Kunezinketho eziyisisekelo ezi-3 ezihambisana nezindawo ezihlukene nezindawo zokubonisa.
Isibhengezo sesango lesikwele esiyisikwele se-arch, Ilungele imigqa yokuqala neyokuqeda, noma njengamasango Okuqala kanye namasango oQeda omjaho we-Fpv Drone, futhi ingasetshenziswa njengesango lomcimbi noma amakhothamo esango lokuphromotha njengokuvulwa kwesitolo semicimbi, ukukhangisa kwemikhosi.Imidwebo ingenziwa ngendlela oyifisayo, Indwangu enayiloni eqinile iqinile ukuze isetshenziswe ngaphakathi/ngaphandle.
Imicimbi eminingi yamanje ye-FPV isebenzisa amafulegi omaka kanye namasango omjaho we-DIY FPV, Aklanyelwe abagijimi be-FPV, abonakala ngokwedlulele futhi ahlala isikhathi eside emoyeni futhi anikeza izinkomba ezibukwayo ezinhle kakhulu ku-FPV Track/Course yangakini. lawa masango enziwe ngeprop Indwangu eqinile .Kufakwe uhlaka oluqinile lwe-fiberglass pole.Wonke amafulegi omaka kulula ukuwasetha kanye nezisekelo ezibanzi ongakhetha ukuzisebenzisa endaweni ethambile noma eqinile.